Mhute uye Fluffy Vanilla Makeke kubva Kubvira - Makeke
Mvura & Fluffy Vanilla Cupcake Recipe
Ini ndinofunga iyi ndiyo yakanyorova uye yakapfava vanilla mukeke keke nekuti ndizvo zvese zvaunoda kuti mukombe uve. Mazhinji ekuravira mukurumwa kudiki. Iyo buttermilk inowedzera inoshamisa tang uye iyo cupcake yakanyorova, ini ndinogona kunge ndakadya vaviri vasina chando ! Kana uchida yangu chena velvet buttermilk keke kana yangu keke revanilla , iwe uchada aya makeke!
Ini zvakanyanyisa NDINODA RUDO RUDO uyu vanilla keke keke nekuti iri kuita kwakawanda! Unogona kuzvibatanidza ne sitirobheri buttercream kugadzira sitirobheki mapfupi makeke. Unogona kuvaisa nechando neimwe yummy chokoreti ganache kana chokoreti buttercream kana muchero hachisi chinhu chako. Kune vanoda ndimu, edza kuzadza makeke ako nevamwe ndimu curd muhomwe yepiping uye topping neatsva yakadzikama yakarohwa kirimu !
Iwe unogona kuwedzera zvinonhuwira kune iyo batter uye wovaita iwo mune zvinonhuwira keke kana iwe unowedzera kadiki kemoni zest uye mamwe mablueberries. Ichi ndicho chakanyanyisa kurongeka keke rekeke. Ndinochida! Iwe unogona kutowedzera mune inosaswa uye wovaita iwo funfetti makeke!
zvinorevei kutsamwa chocolate
Iyo buttermilk mune ino vanilla mukeke keke inoitawo kuti makeke acho anyorove. Buttermilk iri acidic uye inonyatsoputsa iyo gluten muupfu, kune imwe nyoro cupcake.
Protip - Chishoma chemafuta mune ino kamukira chinobatsira kuchengetedza makatekesi akanyorova asi mafuta akawandisa mukapepeti anozokonzeresa machira kuti abvise kubva mukeke. Izvi zvinogona zvakare kuitika kubva kune yakawandisa mvura muresipi.
Maitiro Ekugadzira Unyoro Vanilla Makeke Makeke Nhanho-Nhanho
Ive neshuwa yekutarisa vhidhiyo pazasi pemwanasikana wangu Avalon achiratidza kuti zviri nyore sei kugadzira iyi vanilla mukeke keke.
Ita shuwa kuti zvese zvako zvinoshandiswa zviri mukati tembiricha yemukati kana kunyangwe diki diki pane inodziya divi. Ndinodziisa mukaka wangu mu microwave kwemasekondi makumi matatu. Iyo bota rinofanirwa kuve rakapfava zvakakwana kuti rirarame mukati maro kana uchiripurinda asi rakasimba zvakakwana kuti richiri rakabata chimiro charo. Isa mazai ako mundiro yemvura inodziya kwemaminitsi mashanu kuti udziye.
Ini ndinoshandisa chiyero kuyera zvese zvangu zvinongedzo kuitira kuti mabikirwo abudike akakwana nguva imwe neimwe. Dzidza zvakawanda nezvekuti sei ini ndichishandisa sikero yekicheni yemareseji angu mune izvi blog post .
Nhanho 1 - Preheat oven yako kusvika pa350ºF uye tara mapani maviri emakeke nemapepa ekeke keke. Iwe unogona zvakare kubika imwe pani panguva kana zviri izvo chete zvaunazvo.
Nhanho 2 - Wedzera yako vanilla kumukaka woisa parutivi.
Nhanho 3 - Sanganisa mazai nemafuta ugoapa kamuridzo keputi kuti aputse mazai. Vaise parutivi.
Protip - Shandisa yakajeka vanilla yakatorwa yeiyo 'yakasarudzika grocery chitoro keke' kuravira. Shandisa chaiyo vanilla mushoma kweiyo chaiyo vanilla flavour kana kunyangwe vanilla bhinzi! Imwe nyemba yevanilla = 2 tsp vanilla yakabudiswa.
Nhanho 4 - Sanganisa hupfu, shuga, poda yekubheka, pasoda, uye munyu mundiro yemusanganisi wako wekumira neshinda yekunamatira.
yekutanga recipe ye red velvet keke
Nhanho 5 - Wedzera muhotela yako yakapfava wosanganisa pazasi kusvikira musanganiswa weupfu wakafanana nejecha. Zvichienderana nekuti bota rako rakapfava sei, izvi zvinogona kutora miniti kana maviri.
Nhanho 6 - Wedzera mumusanganiswa wemukaka uye wedzera kumhanya kusvika pakati (kumhanyisa 4 paKicheniAid, kumhanyisa 2 pabhokisi). Sanganisa kwemaminetsi 1 1/2 kuti uvandudze chimiro chekapu. Iyo batter ichaenda kubva pakuita yero kuenda kune yakajeka fluffy. Iwe unogona kushandisa ruoko musanganisi wedanho rino kana zviri izvo chete zvaunazvo.
Nhanho 7 - Paunenge uchisanganisa pazasi, wedzera mu 1/3 yemazai ako musanganiswa. Regai ibatanidze zvizere wobva wawedzera muhafu yemusanganiswa wakasara, rega itubatanidze zvizere wozowedzera mune zvakasara. Sanganisa kusvikira wangosanganiswa.
Nhanho 8 - Zadza rako remakeke liners 2/3 yenzira izere yekusimuka kwakanyanya. Ini ndinoshandisa yangu yekicheni sikero kuyera yangu batter. 1.5 maoita e batter pa cupcake liner yakakwana kune ovhoni yangu uye kukwirira asi ini ndakasanganisa mhedzisiro mune mamwe mavheni saka tsvaga izvo zvinonyanya kukushandira uye unamatire nazvo. Kubheka pakakwirira? Tarisa uone yangu kukwirira kwakakwirira kubheka hacks .
Nhanho 9 - Bika makeke ako kwemaminetsi gumi nemashanu kusvika gumi nemashanu kana kusvika vangotanga kuita brown yegoridhe uye pakati pekeke rinotubuka kana uchinge wabata zvishoma nemunwe wako. Ini ndinotenderera makeke angu pakati nepakati kubheka kunyange kunyatso browning.
Nhanho 10 - Rega makeke ako atonhorere kwemaminitsi mashanu wobva waendesa kune inotonhorera rack kuti itonhore zvakakwana usati waapedza chando! Ini ndinoda kushandisa yangu yakapusa buttercream kutonhora asi iwe unogona kushandisa chero mhando yechando yaunofarira! Ini ndaishandisa pombi bhegi uye 15mm nyeredzi kuridza pombi.
Matipi ekubudirira uye FAQ
Nei makeke angu akapfava? Iwe unogona kunge uchibika pakadzika kwazvo tembiricha. Kubheka pa350ºF kunoita iyo cupcake yakanaka uye ine fluffy uye inogadzika ndiyo dome. Kubheka pakadzika kwazvo tembiricha kunoita kuti makeke ako akatsemuka. Hauna chokwadi kuti tembiricha yako yeovheni chii? Iwe unogona kuwana thermometer yeovheni kuti uenzanise kudziya kweovheni yako.
Unoita sei kugadzira fluffy vanilla mukeke keke? Chakavanzika chemakeke emvura akakwana kubheka hupfu kuti unyatsowana kukwira kwakakwirira uye kwakanyanya tembiricha tembiricha kuti igadzire yakawanda yekusimudza uye kuseta iyo dome rekapu. Mvura yakawandisa mumakeke ako kana kuzadza ma liners ako zvinogona kuita kuti vadonhe.
Sei makapu angu ekeke achidhonza mushure mekubheka? Zvinogona kunge kuti yako yekubheka ine yakawandisa mvura, mafuta, kana kuti ako liners asiri mafuta-chiratidzo . Liners dzako dzinogona zvakare kukwevera kure kana iwe uri kuchengetera makeke ako mumudziyo wakavharika uye hunyoro hunokonzera kuti vasiye.
Iwe unogona here kuwedzera kunhuwira kune iyi vanilla keke keke? Iwe unogona kushandura zviri nyore kunhuwirira kwemakeke aya kubva kuvanilla kusvika kumonimu kana zvinonhuwira nekutsiva dhizaini uye nekuwedzera muzvinhu zvakaita sezvinonhuwira kana zest. Iwe unogona zvakare kuwedzera mukati kusvika 1/4 mukombe yechinhu chero chakaoma senge mafafashi, yakapwanyika Oreos, kana michero pasina kushandura iyo yekubheka.
Nei makeke angu akanamira? Kana iwe ukavhara makeke ako nepurasitiki yekumonera kana kuiisa mumudziyo vasati vanyorova zvachose, condensation inounganidza pamusoro pekeke ichiita kuti ive soggy.
Nei makeke angu achidzikira? Makeke anogona kudonha kubva pamusoro-kusanganisa yako batter, pamusoro-kubheka kana yakawandisa mafuta / mvura mune yekubheka
ngirozi chikafu chekeke recipe nema strawberries uye inotonhorera chikwapuro
Unogona kuomesa makeke here? Makeke anogona kuomeswa nechando mumasaga emashure kwemwedzi mitanhatu.
Chokoreti Buttercream Frosting
Chena Velvet Keke
Aya anoshamisa vanilla makeke anowana iwo manakiro uye velvety mameseji kubva buttermilk. Ikapu inonyorova uye inoputika iyo yakanaka kune chero chiitiko chakakosha. Iyi kamukira inogadzira makumi maviri nemaviri makeke nevanilla frosting. Gadzirira Nguva:10 mins Nguva Yakabika:16 mins Nguva Yese:26 mins Makorori:209kcal
▢10 oz (284 g) upfu hwekeke
▢9 oz (255 g) shuga yakawanda
▢1/4 tsp (1/4 tsp) soda yekubikisa
▢piri yakakura (piri yakakura) mazai tembiricha yekamuri
▢4 oz (114 g) mafuta ekubikisa
▢5 oz (142 g) buttermilk tembiricha yekamuri kana kudziya zvishoma
▢4 oz (114 g) ruomba isina sarufa uye yakapfava
▢piri tsp (piri tsp) Vanilla
▢24 ounces (680 g) unsalted ruomba zvapfava
▢24 ounces (680 g) hupfu hwehuga
▢6 ounces (170 g) pasteurized zai vachena
▢1 diki donhedza chikafu chepepuru (inosarudzika yechena kutonhora)
ONA: ZVINOKOSHA ZVINOKOSHA KUTI tembiricha yemukamuri yese yakanyorwa pamusoro apa tembiricha yemukati uye kuyerwa nehuremu kuitira kuti izvo zvinosanganisa zvisanganise uye zvibatanidze nenzira kwayo Ikoji inopisa kusvika ku 350º F
Gadzirira pani yako yekeke nemakeke ekeke
Sungai buttermilk uye vanilla uye sarudzai parutivi
Sanganisa mafuta nemazai. Whisk kuputsa mazai. Kuisa parutivi.
Sungai furawa, shuga, poda yekubheka, kubika soda uye munyu uye bota mumudziyo wemosanganisi wemira pamwe neshongedzo yepaddle. Sanganisa pazasi kuti ubatanidze kusvikira musanganiswa wacho wakaita sejecha rakakora.
Wedzera mumusanganiswa wako wemukaka uye rega musanganise kusvikira izvo zvakaomeswa zvigadzirwa zvanyoroveswa uye wozokanda kusvika med (kumisikidza 4 pane yangu KitchenAid) uye rega kusanganisa kwemaminetsi 1 1/2 kuti uvake chimiro chekapu. Ukasarega keke rako richisanganiswa padanho iri keke rako rinogona kupunzika.
Nyorura ndiro yako uye wozodzora kumhanya kusvika pasi. Wedzera mumusanganiswa wako wezai mumatatu matatu, muchirega batter ichisanganisa kwemasekondi gumi nemashanu pakati pekuwedzera.
Svetera pasi mativi zvakare kuti uve nechokwadi chekuti zvese zvinosanganisirwa kudururwa mumakapu akagadzirwa eneki 2/3 yakazara kana 1.5oz batter pakeke rimwe. Bika maminetsi gumi nemaminetsi makumi maviri neshanu kusvika micheto yatanga kungoti shava uye nzvimbo yacho inodzosera kumashure paunoibata. Shandura pani hafu pakati pekubheka.
Rega makeke atonhorere zvizere usati waita chando
Mundiro yemira yako musanganisi neiyo whisk yekubatanidza, whisk mazai machena uye shuga yeupfu pakakwirira kwemaminiti 1
Deredza kumhanya kusvika pasi uye wedzera muvanilla yako, munyu uye yakanyoroveswa bota.
Wedzera kumhanya kusvika pakakwirira uye rega chiputi chando kusvika chachena, chena uye chinyoro. Ipa iyo kuravira, kana ichiri kuravira bhotoro, ramba uchisanganisa. Izvi zvinogona kutora maminetsi gumi nemashanu. Inogona kutaridzika kunge yakakombama, ramba uchisanganisa.
Wedzera mune yakasarudzika yepepuru chikafu chevara. Chinja padanda rekunamatira uye sanganisa pazasi kwemaminetsi gumi nemashanu (sarudzo) kuti ubvise mabhuru emhepo uye woita kuti buttercream yako inyatsotsetseka.
Kuti uwane kumuka kwakanyanya, zadza liners yako 2/3 nekapu batter kana 1 1/2 ounces pakapu imwe
Ita shuwa kuti zvese zvako zvinoshandiswa zviri mukati tembiricha usati wasanganisa batter yako (mukaka, batare, mazai).
Preheat oven yako kusvika ku 350ºF kwemaminitsi makumi matatu usati wabheka kuti upe makeke ako kusimuka uye woisa dome.
Akabikwa makeke anogona kuomeswa nechando kwemwedzi mitanhatu.
Kushumira:1cupcake|Makorori:209kcal(10%)|Carbohydrate:25g(8%)|Mapuroteni:pirig(4%)|Mafuta:gumi neimweg(17%)|Mafuta Akaguta:7g(35%)|Cholesterol:16mg(5%)|Sodium:198mg(8%)|Potassium:93mg(3%)|Shuga:14g(16%)|Vhitamini A:195IU(4%)|Calcium:40mg(4%)|Iron:0.2mg(1%)
unogona here kudya mazai akasengwa asina mbishi
maitiro ekugadzira kanyorova bhokisi keke
maitiro ekugadzira chingamu kunamatira maruva emakeke
kugadzira keke uchishandisa fondant
maitiro ekugadzira keke nefondant